161CM Mara mma Dollhouse 168 Mmekọahụ Mmekọahụ Belata Nchegbu Gị
Afọ ojuju Dollhouse 168 Mara mma 161CM Mmekọahụ Doll
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụ bebi mmekọahụ bụ itinye ego n'otu oge. Iji jide n'aka na ị zụrụ nke ziri ezi, na-elele mgbe niile ụdị ọdịdị nwa bebi ahụ. Nke a bụ 161cm ogologo nwa bebi, niile si Dollhouse 168 ika. Achọrọ m ka ị họrọ ngwaahịa kachasị amasị gị ebe a. Iji nweta ahụmịhe ka mma na ogologo oge, ọ dị mkpa ịnweta nwa bebi mmekọahụ nwere ọkpụkpụ siri ike ma na-agbanwe agbanwe.
Anya Oji Ocha 161CM Nnukwu Anụmanụ TPE Japanese Doll Kaede